तीन वर्षमा सरकारले वाह ! भन्ने काम गरेर देखाउछः कृषिमन्त्री खनाल « Ramechhap News
तीन वर्षमा सरकारले वाह ! भन्ने काम गरेर देखाउछः कृषिमन्त्री खनाल
असोज १७ सिन्धुली । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले सरकारले स्थानीय किसानको समस्या समाधान गर्न लागि परेको बताएका छन् । नेकपा सिन्धुलीले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् । उनले सिन्धुलीको स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्टिय रुपमा पुर्याउन सरकारले प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाका रुपमा जुनारका लागि सुपरजोन क्षेत्र तोकेको बताए ।
कार्यकर्तासँगको अन्र्तक्रियामा उनले आफूले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ठोस योजनाका साथ काम गर्ने उल्लेख गरे । नेकपा माओबादीका स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका खनालले पार्टीमा देखिएका केही अन्तरविरोध देखिएपछि त्यसबाट कार्यकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले अहिले देश नयाँ संघीय संरचनामा गएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने काममा केही अन्योलता देखिएपनि त्यस्को समाधानका लागि मन्त्रिपरिषदमा निरन्तर छलफल भइरहेको उल्लेख गरे ।